OGAYSIIS: Shabakada Gool24 Oo Ka Soo Jawaabtay Dalabkii Akhristayaasha. - Gool24.Net
OGAYSIIS: Shabakada Gool24 Oo Ka Soo Jawaabtay Dalabkii Akhristayaasha.
April 18, 2020 Mahamoud Batalaale
Asalaamu calaykum, waraxma tulaahi wabrakaatuhu, idilkiinba salaan dhamaan akhristayaasha sharafta leh ee aanu jecelnahow. Meel kasta iyo waqti kasta oo aad ku jirtaan ha idiin wacnaado ilaahayna ha inaga badbaadiyo musiibada wareegaysa ee Covid-19.
Maanta waxaa farxad khaas ah noo ah in ka shabakada Gool24 ahaan aanu ka soo jawaabnay dalabkii akhristayaashu u qabeen in ay helaan App rasmi ah oo ay kaga nastaan in ay website-ka soo raadiyaan markasta oo ay soo booqanayaan.
App-ka rasmiga ah ee Gool24 waa mid aad u fudud isla markaana aan wax culays ah ku keeni doonin mobile-kaaga wuxuuna kuu sahlayaa in sida ugu sahlan ayaad wararka ciyaaraha ku heli karto adiga oo aan meelo ka raadin.
Hadda waxaa diyaar ah App-ka Gool24 ee mobile-da Smart phones-ka ah ama Android system-ka ku shaqeeya, iyada oo aanu insha Allah rajaynayno in waqtiga ugu suurtogalsan aanu soo diyaarin doono iOS-ka mobile-da Iphone-ka ah.
Mar labaad sharaf ayay noo tahay in aanu ka soo jawaabnay dalabka baahidii akhristayaasha boqolaalka kun ah ee ku xidhan shabakada caalamiga ah ee Gool24 si ay u helaan App-kan ay sida sahlan mobile-kooda ugu dajisan karaan si ay wararka qaabka ugu sahlan u helaan.
Haddaba halkan hoose ka dajiso, app-ka Gool24, kadib wixii fikrad ah waxaad noogu soo qori kartaan qaybta Review-ga ee appka si aan u ogaano dariinkiina.
Dajiso App-ka Gool24: Anroid App For Gool24.net
Balanteenu waa idinka oo appka ku dajista mobile-diina iyo qaybta review-ga oo aad noogu soo qortaan aragtidiina. Aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin sida aad ugu xidhan tihiin shabakada caalamiga ah ee Gool24, anagana waxaa naga go’an in aanu idinku raali galino wararka ciyaaraha ugu danbeeya.
Axmed tottenham says:
Waad nawada raali galiseen runtii waxan anaguna hadaa nahay asxaabta ku xidhan gool24 hore u socda dadaalkiina sii wada
Shabakada Gool24 Salaan Kal iyo Laab Ah Ayaa
Hawada idin so marinaayaa Salaan taa so Ah Salaanta islaamka Asc Warax matullaahi Wa bara kaatuhu Salaan ka dib Waxaan Aad iyo Aad ugu farax sana hy sida Mar Waliba Oo Hagar la’aan Aanu Kahelno Wax Walibo Oo Ku Saabsan Footballka Gaar Ahaan Horyaalda iyo suuqaba Codsi Anigo Ka tarjumaaya Bulshada Sportska Dhalanyardeena Somaaliyeed in Aad Noo badi saan Wax Yaa baha Ka dhaca Suuqa Kala iib siga Codsi YouTube Channelna Sameesta Mahadsanidiin